Isnapchat ine dambudziko rekubatana neWiFi? Heino mhinduro yekupedzisira yePhones uye iPads! - Zvimwe
hotspot yangu haisi kushanda
yekukuvara kwemvura chiratidzo iphone 6s
tsvaga nhamba yenharembozha
Snapchat haisi kushanda pane yako iPhone kana iPad uye iwe hauzive zvekuita. Pane imwe nguva, iwe wanga uchitumira selfies yekati yako kushamwari dzako, asi izvozvi app yacho haishande zvachose! Muchikamu chino, ini ndichatsanangura kuti sei Snapchat haishande neWiFi uye ini ndichakuratidza maitiro ekugadzirisa dambudziko zvine mutsindo , kunyangwe uri kushandisa iPhone kana iPad .
Kutanga, ita shuwa kuti iyo Snapchat app yasvika parizvino
Snapchat inogona kusashanda pane yako iPhone kana iPad kana usati watora pasi yazvino gadziriso yeapp. Vagadziri vanogara vachishanda kuti vavandudze mashandiro emaapplication avo uye vanogara vachisunungura zvigadziriso kuti vawedzere maficha, gadziridza software bugs, uye uwedzere matanho ekuchengetedza kuchengetedza vashandisi vavo.
Kuti utarise nezve Snapchat kugadzirisa, vhura iyo App Store uye tapira paKugadziridza tebhu mukona yezasi yekurudyi yeiyo iPhone kana iPad skrini. Tsvaga Snapchat mune iyo rondedzero ye Dzakamirira kugadzirisa uye tora bhatani rebhuruu Kugadziridza padyo neapp kana iyo yekudzorera iripo.
juul achibwaira chena pajaja
Chii chandinofanira kuita kana Snapchat isingashande neiyo WiFi?
Tangazve yako iPhone kana iPad
Chinhu chekutanga kuita kana Snapchat isiri kushanda neWiFi yako kutangazve yako iPhone kana iPad. Paunodzima chako chishandiso nenzira kwayo, iwe unobvumidza ese mapurogiramu esoftware anoshandisa yako iPhone kana iPad kuti ivhare zvakasikwa, izvo dzimwe nguva zvinogona kugadzirisa diki software bug.
Kudzima mudziyo wako, pinda uye bata iyo kurara / wake bhatani (inonyanya kuzivikanwa se bhatani remagetsi ) kusvikira iyo tsvuku yesimba icon yaonekwa uye mazwi Rova zvakasimba kudzima pahwindo re iPhone yako kana iPad. Slide iyo tsvuku simba icon kubva kuruboshwe kurudyi uye yako iPhone kana iPad inodzima.
Mira kweminiti, wobva wadzosera yako iPhone kana iPad kumashure nekudzvanya iyo kurara / wake bhatani kusvikira iyo logo yeApple yaonekwa pakati pechidzitiro chako.
Dzorera iyo WiFi uye on zvakare
Kufanana nekutangazve yako iPhone kana iPad, kudzima WiFi kudzima uye kudzoka pane dzimwe nguva kugadzirisa diki software software iyo inogona kunge yakaitika kana iwe ukaedza kubatanidza mudziyo wako kune WiFi network.
Kuti udzivise WiFi pane yako iPhone kana iPad, vhura iyo app Zvirongwa uye bata Wi-Fi . Wobva wadzvanya chinja kurudyi kweWi-Fi kuti ubhure. Iwe uchaziva kuti switch inodzimwa kana yaita grey uye inotsvedza iri kuruboshwe.
Mira masekondi mashoma, wobva wadzosera WiFi kumashure nekukanda switch zvakare. Iwe uchazoziva kuti WiFi iri zvekare kana switch iripedyo neWi-Fi iri girini uye inotsvedza iri kurudyi.
Unganidza yako iPhone kana iPad kune imwe netiweki yeWiFi
Kana Snapchat isiri kushanda pane yako netiweki yeWiFi, unogona kuyedza kubatanidza yako iPhone kana iPad kune yemumwe network. Iwe unogona zvakare kuyedza kubatanidza kune emahara eWiFi network kune yako raibhurari yemuno, Starbucks, kana Panera.
Kana yako iPhone kana iPad ichibatanidza kune mamwe ma network, asi isingabatanidze kune yako, zvinogona kunge zvichikonzerwa nedambudziko neisina waya yako router uye kwete yako iPhone kana iPad. Edza kutangazve yako router kana kubata wako asina waya mupi kuti awedzere rubatsiro.
Kanganwa iyo netiweki yeWiFi uye dzorerazve
Kana yako iPhone kana iPad ikabatana neWiFi network kekutanga, inochengetedza data nezve sezvo batanidza kune iyo chaiyo network yeWiFi. Kana chikamu cheiyo yekubatanidza maitiro akachinja, kana kana faira rakachengetedzwa rikaora, rinogona kudzivirira yako iPhone kana iPad kuti isabatanidzwe kunetiweki.
Ongorora: Usati wakanganwa netiweki yeWiFi, ita shuwa kuti waita chinyorwa che password yayo. Iwe uchafanirwa kupinda mukati zvakare paunotangazve kune network!
iphone bhatiri inofa nekukurumidza
Kuti ukanganwe network yeWiFi, tanga nekuvhura application Zvirongwa nekubata Wi-Fi. Wobva wadzvanya bhatani reruzivo kurudyi kwenzvimbo yeWiFi yaunoda kuti yako iPhone kana iPad ikanganwe. Pakupedzisira, bata Kanganwa network iyi , munguva pfupi Kukanganwa paunowana yambiro yekusimbisa.
Kuti ubatanidzwe zvakare kunetiweki iyo yako iPhone kana iyo iPad yakangokanganwa, tinya iyo network mune iyo chinyorwa mushure Sarudza network ... uye nyora pasiwedhi, kana zvichibvira.
Paunogadzirisazve maratidziro enetiweki pane yako iPhone kana iPad, chero data rakachengetwa muWiFi yako, VPN, neBluetooth zvigadziriso zvinodzimwa kubva pane chako chishandiso. Zvinowanzoomera kutsvaga pasi chairo sosi yeipi dambudziko re software pane yako iPhone kana iPad, saka ngatibvisei zvese chero chingave chine hukama nedambudziko.
Ongorora: Usati waseta patsva maratidziro enetiweki pane yako iPhone kana iPad, ita shuwa kuti wanyora pasi mapassword ewetiweki yako yeWiFi nekuti iwe uchafanirwa kuadzipindazve kana gadziriso yapera.
maitiro ekuisa iphone 6 mune dfu modhi
Kuti umise zvakare maratidziro enetiweki, vhura iyo app Zvirongwa uye dzvanya General> Reset> Reset Network Zvirongwa . Wobva waisa password yako uye simbisa iyo reset paunoona yekusimbisa yambiro pane yako iPhone kana iPad skrini. Iyo reset ichatanga uye chishandiso chako chobva chatanga kana chapera.
Uninstall uye dzosera Snapchat
Kana iwe wakazviita kusvika ikozvino, asi Snapchat ichiri kusashanda pane yako iPhone kana iPad, iro dambudziko rinogona kunge riine iyo app pachayo, kwete yako kifaa kubatana kweWiFi. Kugadzirisa zvinogona kuitika bug mukati meapp, edza kusunungura uye kumisikidza iyo app.
Kubvisa Snapchat pane yako iPhone kana iPad, pombi uye ubatisise iyo icon icon kudzamara mudziyo wako wazununguka zvishoma uye maapplication ako atanga kufamba. Kuti ubudise Snapchat, tinya iyo diki 'X' mukona yekumusoro yekona yeapp icon uye tap Bvisa paakabvunzwa kusimbiswa. Usatombo kunetseka: yako Snapchat account haizobviswa kana iwe ukabvisa iyo app kubva kune yako iPhone kana iPad.
Kuti udzorezve Snapchat, vhura iyo App Store, rova ​​iyo Yekutsvaga tebhu pazasi pechiso, uye nyora 'Snapchat' mubhokisi rekutsvaga. Kurudyi kweSnapchat, tinya Wana uye gare gare Isa , kana tinya iro icon icon ine bhuruu yakadzika-inonongedza museve kudzoreredza iyo app.
Tarisa uone kana maseva eSnapchat ari pasi
Kana pasina chakashanda kusvika parizvino, ungangoda kutarisa kana Snapchat isiri kushandira vamwe vashandisi ve iPhone ne iPad. Dzimwe nguva maapplication anosangana nenjodzi huru, maseva anoenda pasi, kana vanogadzira vanoita kugadzirisa kwemazuva ese, zvese izvi zvinogona kudzora kugona kwako kushandisa Snapchat pane yako iPhone kana iPad.
Kuti uone kana vamwe vanhu vari kusangana nedambudziko rakafanana, Google ' Snapchat iri pasi ”Uye tarisa akasiyana mawebhusaiti ekuzivisa mawebhusaiti nezvematambudziko akajairika. Kana Snapchat isiri kushanda paWiFi kune vamwe vazhinji vashandisi, iwe ungatofanira kuve nemoyo murefu kudzamara timu yekutsigira inogona kugadzirisa nyaya.
Selfie mhemberero: Snapchat yakagadziriswa!
Iwe wakabudirira kugadzirisa Snapchat pane yako iPhone kana iPad uye unogona kutanga kutumira selfies kushamwari dzako zvakare. Kunyangwe pasina iyo Snapchat account yePayette Pamberi, tinovimba muchagovana chinyorwa ichi pane mamwe magariro enhau mapuratifomu kuitira kuti shamwari dzako nemhuri vazive zvekuita kana Snapchat isiri kushanda paWiFi. Kutenda nekuverenga, uye gara uchiyeuka Payette Pamberi.